Ihe ọ bụla ị chọrọ ịma banyere magnetosphere | Netwọk Mgbasa Ozi
Planetwa anyị nwere magnetik. Amara ya site na aha geomagnetic ubi. N'etiti ndị dị iche iche oyi akwa nke ikuku anyị na-ahụ otu oyi akwa nke bụ otu na ụwa dum ndọta. A na-akpọ oyi akwa a magnetosphere. Nke a bụ ihe edemede taa gbasara. Anyị ga-ekwu maka ihe ndọta ihe bụ, ihe ọ bụ na ihe ọ bara uru maka ya.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ndọta ihe, nke a bụ ọkwa gị.
1 Kedu ihe magnetosphere
3 Mkpa nke ndọta
4 Mgbanwe nke magnetik ụwa
Kedu ihe magnetosphere
Dị ka a ga - asị na anyị na - ekwu maka ndọta dị n'etiti etiti ụwa anyị, magnetik nke ụwa na - arụ ọrụ site n ’ikuku eletrik. A na-emepụta mmiri eletrik site na ihe a na-akpọ okwute ntụgharị nke na-ewere ọnọdụ na mpụga nke ụwa. N'ime isi a, anyị na-ahụ nnukwu igwe nkedo na-agagharị na mbara igwe niile n'ihi ọdịiche dị na njupụta. Mmiri iyi ndị a na-erukwa na uwe elu ụwa ma ọ bụ ọrụ maka ngagharị nke kọntinent.
N'agbanyeghị ihe ị nwere ike iche, n'ime ime ụwa enwere okpomọkụ dị elu karị. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka nrụgide nke ihe ndị ahụ, ígwè ahụ ga-agbaze kpamkpam. Otú ọ dị, ọ bụghị n'ihi nrụgide nke ike ndọda kpatara. Ya mere, na isi nke dị n'ime oyi akwa 2000 kilomita, ee nwere wụrụ awụ ígwè, nickel na ndị ọzọ obere kasịnụ nke ndị ọzọ ọla na mmiri mmiri ala. Site n’inwe obere nrụgide karịa ihe ndị ọzọ nwere ike ịchọta agbaze.
Esemokwu dị iche iche dị na okpomoku, nrụgide, na ihe mejupụtara bụ ihe na-ebute ntụgharị. Dị ka ihe na-ajụ oyi ma ya mere na mmiri na-agba mmiri, okwu ahụ dị ọkụ karị na-ebili. E nwekwara oku ike coriolis nke bụ nsonaazụ nke ụwa na-agba gburugburu na-akpata eddies na ngwakọta a gbazere agbaze. N'ihi ihe a niile, a na-emepụta mmiri eletrik n'ime mbara ala nke na-emepụta oghere magnetik.
Ọ bụ ọla a na-akwụ ụgwọ na-agafe n'ubi ndị a ma mepụta mmiri eletrik ha. A na-akpọ usoro a, nke zuru oke, dị ka geodynamic.
Ozugbo anyi matara otu magnetik nke uwa, anyi puru ihu na magnetosphere bu ihe na - ejikwa magnet nke uwa. Ọdịdị nke ndọta a na-adabere n’ọrụ nke ikuku anyanwụ n’oge ọ bụla. Ifufe nke anyanwụ na-eme ka akụkụ na-abụghị nke ya gbasaa ruo ebe dị ihe ruru otu puku ugboro okirikiri nke dị n’etiti anyanwụ na ụwa. Nnukwu mbara igwe nke magnetosphere a maara dị ka ọdụ magnet.
Ike nke magnetik abụghị otu na mpaghara ụwa niile. Dịka ọmụmaatụ, ike dị ala na Equator na nke kachasị elu na okporo osisi. A na-akpọ njedebe nke magnetosphere, dị ka a na-akpọ oyi akwa ndị ọzọ nke ikuku, magnetopause. Anyị nwere ike ịsị na nhazi nke magnetosphere na-agbanwe agbanwe. Nke a bụ n'ihi na ọ dabere ọtụtụ n'ọrụ nke ifufe anyanwụ. Ogwe magnetik na osisi ala. Enwere ọdịiche dị ihe dị ka ogo 11 n'etiti ha. Enwere otutu ihe omumu nke ndi sayensi choputara na ngbanwe nke uzo uzo magnet. Usoro nghazi nke magnetik ugwu dị ihe karịrị narị kilomita isii site na ebe ọ dị na mmalite 600s. Achọpụtakwala ọsọ ọsọ ha site na kilomita 40 kwa afọ.
Enwere otutu ihe omuma banyere ala, karia nke uzo nke nkume, nke gosiputara na ihe omuma a agbanweela otutu otutu oge otutu nde 500 gara aga. Na ntụgharị ọ bụla, okporo osisi magnetik na-adịkarị na nsọtụ ụwa. Nke a ga - eme ka compass gbasiri ike na-atụ aka n’ebe ndịda nọ kama n’ebe ugwu.
Dịka anyị kwuburu, ọ nwere ọrụ anyanwụ na-akpọ ikuku anyanwụ. Ikuku ikuku a abughi ihe ozo kariri iyi nke ikuku nke na-esi n'igwe. Site na ịdị adị nke magnetosphere anyị nwere ike ịghọta ikuku anyanwụ a n'emebighị ndụ anyị. Anyị na-ahụkarị ikuku anyanwụ a dị ka ọkụ ugwu na oké ifufe geomagnetic. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka oyi akwa a, ọ nwere ike imebi usoro nkwukọrịta anyị niile dịka Satellites na sistemụ redio. Ọ bụrụ na n'ime ụwa magnetik anyị agaghị enwe ikuku ma, ya mere, okpomọkụ nke ụwa ga-adị iche n'ụzọ yiri nke ọ na-eme n'elu ọnwa. Nke ahụ bụ ịsị, na oke okpomọkụ sitere na 123 ruo 153 degrees.
E nwere ọtụtụ anụmanụ dịka nnụnụ na mbe nke nwere ikike ịchọpụta magnetik nke ụwa ma jiri ya mee njem n’oge oge Mbugharị. O nwekwara nnukwu uru dị mkpa n'ịmụ banyere ndị ọkà mmụta mbara ala iji nyochaa akụkụ nke okwute ndị dị n'okpuru ala. Ndị nyocha bụ ndị na - achọ mmanụ, gas ma ọ bụ ihe nkwụnye ego na ekele na mpaghara magnet a ha nwere ike ịchọta ya ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na mmanụ ọkụ ndị a bụ ntọala nke ike ụwa maka ụmụ mmadụ, anyị nwere ike ịhụ mkpa ndọta.
Iji chịkọta ya nkenke, anyị nwere ike ikwu na magnetik dị mkpa maka ụwa iji kwado ndụ.
Mgbanwe nke magnetik ụwa
Igwe magnet a a nwere obere mgbanwe na oge 24. Ihe dịgasị iche iche na-emetụta ụzọ kompas na-atụ. A na - ahụ ihe dị iche na otu ụzọ n'ụzọ iri nke imeju yana ike zuru oke na-echegbu naanị 0,1%.
Agbanyeghị na ha anaghị arụ ọrụ oge niile n'otu ụzọ ahụ, ọdịiche magnet nwere ụfọdụ usoro. Patternkpụrụ bụ isi bụ njikọ dị na mkpuchi ihu igwe ma na-adịru afọ iri na otu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere magnetosphere na mkpa ọ dị maka ndụ na mbara ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Magnetosphere
Oke Osimiri Tyrrhenian
Gịnị bụ orography